Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Gobolka Hindiya Hadda Wuxuu Diirada saaraa Dalxiiska Adkaysiga leh
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Wararka Hindiya • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dalxiiska waara ee Odisha
Dalxiiska Odisha ayaa shalay abaabulay “Dalxiis loogu talagalay Kobaca loo dhan yahay - Milicsiga & Jidka Hore” webinar si wadajir ah FICCI, oo qayb ka ah dabaaldegga Maalinta Dalxiiska Adduunka 2021.
Farriinta ka timid Chief Chief Odisha waxay iftiimisay baahida loo qabo dalxiiska ay bulshadu wadato.
Odisha wuxuu soo bandhigayaa kayd biyood aan la taaban karin oo waayo -aragnimo dalxiis ah.
Iyada oo safarka iyo dalxiisku ay sii wadaan dagaalka ay kula jiraan masiibada, Dalxiiska Odisha wuxuu qaadayaa tillaabooyin deg-deg ah oo ku wajahan horumarinta isku-dhafan ee waaxda dalxiiska ee gobolka oo ah mid is-waarta oo taageerta soo-kabashada dhaqaale ee ballaaran.
Wasiirka ugu sarreeya Mr. Naveen Patnaik, Xukuumadda Odisha, ayaa diray farriin muujineysa baahida loo qabo waaxda dalxiiska oo is-waarta, mas'uul ka ah oo ay bulshadu waddo. Farriinta waxaa akhriyay intii lagu jiray webinar -ka Mr. Sachin Ramchandra Jadhav, Agaasimaha & Addl. Xoghayaha, Waaxda Dalxiiska, Dowladda Odisha.
Wuxuu yiri:Odisha wuxuu soo bandhigayaa kayd biyood aan laga faaidaysan oo waayo -aragnimada dalxiiska ah. In kasta oo ay jiraan caqabado ka dhashay masiibada, waxaan aragnay xoogga iyo adkeysiga ay muujiyeen daneeyayaasha dalxiiska iyo warshadaha soo -dhoweynta si loo abuuro jawi ammaan ah, aamin ah oo khibrad u leh kobcinta safrayaasha si ay u sahamiyaan Odisha - Qarsoodiga ugu Wanaagsan ee Hindiya.
“Mawduuca Maalinta Dalxiiska Adduunka ee 2021 waa Dalxiiska Kobaca Loo Dhan Yahay. Iyada oo waaxda socdaalka iyo dalxiiska ay sii waddo dagaalka ay kula jirto masiibada, Dalxiiska Odisha wuxuu qaadayaa tillaabooyin deg-deg ah oo ku wajahan horumarinta isku-dhafan ee waaxda dalxiiska gobolka oo ah mid is-waarta oo taageerta soo-kabashada dhaqaale ee ballaaran. Dalxiiska waarta oo mas'uul ka ah ayaa u ah Odisha.
“Dalxiiska waarta oo mas’uul ka ah waa mid u gaar ah Odisha. Bixintayada muhiimka ah waa mid u janjeedha bulshada. Abaalmarinta ku-guuleysiga abaal-marinta Odisha ee xerooyinka dabeecadda ee bulshada la maamulo ayaa tusaale u ah qaabkan xaraf iyo ruux. Waxaan sidoo kale soo bandhignay Qorshaha Dhismaha Guriga Odisha ee 2021 si loogu suurtogeliyo abuurista khibradaha dalxiiska ee dhex mara iyada oo loo marayo hawlgalinta guryaha dadka aan la sahamin meelaha kala duwan ee noolaha oo leh dhaqan hodan ah iyada oo kor loo qaadayo ganacsiga maxalliga ah iyo kordhinta hab-nololeedka miyiga.
“Dadaallada aan ugu jirno in aan Odisha u dhisno xarun dalxiis oo heer caalami ah, waxaan si firfircoon uga shaqeyneynaa horumarinta kaabayaasha iyada oo loo marayo qorshe guud oo isku dhafan oo ah meelaha mudnaanta leh ee la aqoonsaday oo ku baahsan gobolka oo dhan oo leh baaxad ka -qaybgalka bulshada iyo ku daridda qiime waara oo lagu daro shirkadaha sida farsamada gacanta iyo dhiirrigelinta Cuntada Odia ee dhabta ah. ”
Mudane Jyoti Prakash Panigrahi, Wasiirka Dalxiiska, Luqadda Odia, Suugaanta & Dhaqanka, Dowladda Odisha, ayaa sheegay in Odisha uu dib u habeeyay istaraatiijiyadda iyo aragtida dalxiiska ee deegaanka COVID ka dib isagoo hubinaya in badbaadada ay tahay mudnaanta koowaad.
Isagoo iftiiminaya awoodda baaxadda leh ee dalxiiska ee gobolka, Mr. Panigrahi wuxuu yiri: “Waxaan leenahay muuqaal gaar ah, dhaqan firfircoon iyo goobo dhaxalgal ah oo ku yaal gobolka Odisha. Sida uu sheegay Wasiir -ku -xigeenkayaga sharafta leh, xukuumaddeennu waxaa ka go'an inay daryeel -ku -samayska ku daryeesho qaab ay bulshadu waddo oo waliba waara. Gobolka ayaa sidoo kale helay Abaalmarinta Lacagta ee “Mustaqbalka Mustaqbalka ugu Wanaagsan” ee Abaalmarinta Dalxiiska Mas'uuliyadda 6aad ee Hindiya. Odisha waa hormuudka Dalxiiska iyo Ciyaaraha. Gobolku wuxuu kaloo hogaamiyaa waaxyo kale oo badan sida xoojinta haweenka oo ay ku daydaan dowladaha kale. ”
Dhanka kale, Wasiirka ayaa sidoo kale carrabka ku adkeeyay Dalxiiska Dalxiiska, oo ah siyaasadda Xukuumadda Hindiya, waxayna xustay in gobolku qaadayo dhammaan tallaabooyinka si sax ah laga bilaabo abuuritaanka kaabayaasha aasaasiga ah ee looga baahan yahay Dalxiiska Caravan ilaa badeecada ugu dambeysa si loo hubiyo in tan la dhammaystiro oo dhaqso loo dhaqangeliyo.